VACC1200 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၂၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 1200
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC1200
Withacapacity of 1,200L/hour, VACC1200 Purified water filtration system is suitable for the pure water manufacturers which want to apply modern technology into the manufacturing process for competitiveness increase. With this product, you can recover capital in just 1 year.
တစ်နာရီမှာ ၁၂၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ဒီစက်က ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ချင်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အသုံးပြုရင် တစ်နှစ်အတွင်း အရင်းပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
Are you intending to openapure water manufacturing company? If you are seeking for an industrial water filtration system, just contact us to getamodern water filtration system satisfying ISO 9001:2015 standard. This machine can be used to filter up to 1,200L/hour with various water sources of tap water, well water, groundwater.
With this VACC1200 Purified water filtration system, you will not have to worry about the product quality, maintenance process or high price.
သင်က ရေသန့်ကုမ္ပဏိ ဖွင့်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့သူလား? တကယ်လို့ သင်က ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာစနစ်ကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ခေတ်မီတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာအတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ၁၂၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘုံပိုင်ရေ၊ တွင်းရေ၊ မြေအောက်ရေ စသည့် ရေအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကို စစ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်နဲ့ဆိုရင် ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေး၊ ထိန်းသိမ်းထားမှု၊ ဈေးကြီးခြင်းတွေကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး
What is VACC1200 Purified water filtration system?
VACC1200 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
Purified water isakind of drinking water that is extremely important to our health. Pure water is commonly used in daily life for drinking purposes. It helps to replenish the necessary water amount for the body and can be used to produce electrolyte water, pure ice.
ရေသန့်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာပါပဲ။ ရေသန့်ကို နေ့စဉ် သောက်သုံးဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ရေကို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေပမာဏကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နဲ့ လျှပ်လိုက်ရည် ရေခဲတို့အဖြစ် ပြောင်းဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
Each of us needs from 1.5-2L of wateraday. Regardless of the weather, that isanecessary amount for our body to maintain all activities.
ကျွန်တော်တို့က တစ်နေ့ကို ၁.၅-၂ လီတာ ရေသောက်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုကို ထည့်မတွက်ဘူးဆိုရင် ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရာပါပဲ။
Purified water is marketed in the form of bottles and jars with prices ranging from5to 10 thousand dongs per 500ml bottle and 15-20 thousand dongs fora20-liter bottle.
Pure water is produced underaspecial filtration process with the application of RO, nanoe technology - the most advanced filtration technology currently. With this machinery, you can turn well water, groundwater, tap water, rainwater into the pure water satisfying 6-1-2010/BYT standard of Viet Nam Ministry of Health.
VACC1200 line utilizes RO membrane technology to turn substandard water into pure water. This product is widely chosen by large scale manufacturers.
ရေသန့်ကို ဘူးတွေပုလင်းတွေနဲ့ ၅၀၀ မီလီဘူးကို ဗီယက်နမ်ငွေ ၅-၁၀ ထောင်၊ ၂၀ လီတာဘူးကို ဗီယက်နမ်ငွေ ၁၅-၂၀ ထောင်စသဖြင့် ရောင်းချကြပါတယ်။ ရေသန့်ကို ခေတ်စားနေတဲ့ RO, Nanoe နည်းပညာ အပလီကေးရှင်းတွေပါတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီစက်နဲ့ တွင်းရေ၊ မြေအောက်ရေ၊ ဘုံပိုင်ရေ၊ မိုးရေတွေကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းပေးပြီး ဗီယက်နမ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ 6-1-2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီစေပါတယ်။
VACC1200 လိုင်းက RO အလွှာပါးကို သုံးပြီး အဆင့်မမီတဲ့ရေတွေကို ရေသန့်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဒီစက်က ထုတ်လုပ်သူအများစုက ဝယ်ယူကြပါတယ်။
What is the difference of VACC1200 1200L purified water filtration system compared to other products?
VACC1200 စက်နဲ့ ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားစက်တွေ ကွာခြားချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
- Application of advanced technology with high processing speed (ensuring at 1,200L/hour) The finished products satisfy QCVN 6-1: 2010/BYT standard of Viet Nam Ministry of Health.
- လျင်မြန်တဲ့ အရှိန်နှုန်းနဲ့ ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး ဗီယက်နမ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1: 2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီစေပါတယ်။
- Industrial compact design The machine can operate smoothly with energy-saving and is easy to transport and maintain.
-သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် အင်နာဂျီကို ချွေတာနိုင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင် ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။
- Directly imported from America and distributed by Viet An.-အမေရိကန်မှ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ပြီး Viet An မှ ဖြန့်ချီပါတယ်။
- Automatic and closed manufacturing process through raw filtration with typical features such as heavy metal removal, detoxification, decontamination and deodorizing, limestone removal and water softener, safe filtration, RO membrane, bactericidal system, and bacteria filter.
-ကြီးမားသော သတ္တုများ ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ အဆိပ်အတောက် ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ရောဂါပိုး ကင်းစင်စေခြင်း၊ အနံ့အသက် ပျောက်စေခြင်း၊ ထုံးကျောက်ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေကို ပျော့စေခြင်း၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာ လုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ RO အလွှာပါး၊ ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်စနစ်စတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ အော်တို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
- Noise-free withasilencer integrated, environment friendly. -ဆူညံမှုမရှိဘဲ ညင်ညင်သာသာ လည်ပတ်ပါတယ်
အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘာတွေလဲ
Pump system Pump the water into the Heavy metal filtration system, Detoxification, decontamination, and deodorizing filtration system and Detoxification, decontamination and deodorizing filtration system
ရေစုပ်စက်စနစ်က ရေတွေကို ပိုးမွှားကင်းစင် အနံ့အသက်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ စနစ်ဆီသို့ စစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
+ Air disinfection system: Disinfect the airလေပိုးသတ်စနစ်- လေကို ပိုးသတ်ပေးသည်
+ Heavy metal filtration system: Mn sand, Quartz sand,3gate valve, and composite tanks included to filter heavy metal, Manganese metal, and precipitated heavy metals.
ကြီးမားသော သတ္တုများကို စစ်ပေးသော စနစ်- Mn သဲ၊ သလင်းကျောက်သဲ၊ ၃ ဂိတ်အဆို့၊ စုပေါင်းတိုင်ကီတွေက ကြီးမားတဲ့ သတ္တုတွေကို စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
+ Detoxification, decontamination and deodorizing filter system: Composite tanks, activated carbon and3gate valve included for detoxification, decontamination and deodorizing
အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးမွှား၊ အနံ့အသက် ဖယ်ရှာပေးသော စနစ်- စုပေါင်းတိုင်ကီ၊ ကာဗွန်၊ ၃ ဂိတ်အဆို့တွေ ပါဝင်ပြီး အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးမွှား၊ အနံ့အသက် ဖယ်ရှာပေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
+ Limestone removal system and water softener system: Composite tanks, auto valve
ထုံးကျောက်ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေကိုပျော့စေသောစနစ်- စုပေါင်းတိုင်ကီ၊ အော်တိုအစို့
+ Safe filtration system:
To protect RO membrane
- RO အလွှာပါးကို ကာကွယ်ရန်
RO membrane system To ensure that the pure water satisfies QCVN 6-1: 2010/BYT standard
- RO အလွှာပါးစနစ်- ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1: 2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီစေရန်
What is the price of VACC1200 1200LPH Purified water filtration system?
VACC1200 1200LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာရဲ့ ဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ?
For almost everyone, product price is one of the most important factors. An affordable product with good quality is exactly what every customer expects.
လူတိုင်းအတွက် ဈေးနှုန်းကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဈေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းတာကို လူတိုင်း မျှော်လင့်ကြပါတယ်။
Asahigh-quality manufactured with American technology and directly distributed by Viet An, the product is sold at the price of 7,900USD. This is the cheapest price that you can only find at Viet An.
အမေရိကန်ကနေ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ပြီး Viet An မှ ဖြန့်ချီတဲ့ ဒီစက်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉၀၀ တည်းနဲ့ ဝယ်ယူလို့ ရပါပြီ။ Viet An မှာပဲ ဒီလို အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့ ရမှာ ဖြစ်တယ်။
To learn more about the prices of other machines with different capacities, see https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc .
အခြားစက်တွေနဲ့ ဈေးတွေကို သိရှိချင်တယ်ဆိုရင် https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc .တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
We also offer free shipping and installation nationwide withawarranty period of 12 years and lifelong maintenance.
အခမဲ့ ပို့ဆောင်တပ်ဆင်ပေးပြီး ၁၂ နှစ်အာမခံချက်နှင့်အတူ တသက်တာ ထိန်းသိမ်းမှု ပေးပါတယ်။
To buy the product, you can come to our branches in Hanoi, Ho Chi Minh city, Da Nang and Buon Me Thuot, or call our hotline: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột hoặc liên hệ tới số hotline: 0949414141 We are pleased to serve your demands.
ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် Ho Chi Minh city, Da Nang and Buon Me Thuot မှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲတွေဆီ လာရောက်နိုင်သလို Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột hoặc liên hệ tới số မှာရှိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Use purified water filtration for cube ice making?
ရေခဲစက်အတွက် ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုလား?
Experience in trading bottled water?
ရေဘူးတွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်တဲ့ နေရာမှာ အတွေ့အကြုံ ရှိလား?
What types of water can be filtered with VACC1200 1200LPH Purified water filtration system?
VACC1200 စက်နဲ့ဆိုရင် ဘယ်လိုရေအမျိုးအစားတွေကို စစ်ထုတ်နိုင်လဲ ?
Once you have decided to choose this VACC1200 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရံ2pc VA/ USApec
14 20 Filter Cartridge ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်3pc VA/ USApec
15 Industrial filter housing ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်3pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါ3းpc Hitech-USA/CSM Korea
27 20 Filter housing ၁၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
29 PPR pipe and accessories PPR ပိုက်နှင့် အဆင်တဆာများ full pc Vietnam
30 Stainless steel frame စတိန်းလက်စ်စတီးဖရိန် full pc Vietnam
Hỏi đáp & đánh giá VACC 1200 1200LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်